[Beyond Fest 2020] Ukubuyekezwa: I-'Archenemy 'A Gritty Take On Superheroes and Glory yangaphambili - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo [Beyond Fest 2020] Ukubuyekezwa: I-'Archenemy 'A Gritty Take On Superheroes and Glory yangaphambili
Izindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoI-Psychological Horror (okuthokozisayo)
[Beyond Fest 2020] Ukubuyekezwa: I-'Archenemy 'A Gritty Take On Superheroes and Glory yangaphambili
by UJacob Davison October 17, 2020
ebhalwe ngu UJacob Davison October 17, 2020
Uhlobo lwamaqhawe amakhulu eminyakeni eminingana edlule seluphenduke itende lesinema nesiko le-pop, kokuhle noma okubi. Ngokwenza njalo, kuma-franchise amakhulu afana The Avengers, Batman, U-spider man njalonjalo, kukhulise ukuzivumelanisa kwezincwadi zamahlaya kwizigidigidi zama-dollar extravaganza. Kodwa-ke kunezinhlobo eziningi zezindaba okufanele zixoxwe futhi eziningi ezingatshelwa phansi, esikhundleni samazulu. Njengokuthi uma iqhawe liphelelwa amandla? Benzani-ke? Lokhu ukusetha kwe- Isitha esikhulu.
UMax Fist (uJoe Manganiello, Blood weqiniso) iqhawe elinamandla kunawo wonke endaweni yonke. Okungenani, wayenjalo. Manje, uyindoda engenakhaya nophuzo oludakayo nokukhohliseka okungaba khona kobukhulu nenkinga yentukuthelo. Ukubhoboza izindonga zezitini nokufisa ukukwazi ukubhoboza amabhilidi njengoba ethi angakwenza. Ungaphansi kwesaziso edolobheni elikhulu, ehlekiswa ngubartender wakhe futhi aphathwe njengochuku aze ahlangane nomuntu ozimisele ukumlalela ngempela. IHamster (iSkylan Brooks, Izingqondo Ezimnyama Kakhulu) uyi-vlogger nentatheli yasendaweni efuna isikhulu esikhulu, futhi uyalibona ithuba lakhe noMax. Yize enokungabaza kwakhe ngezindaba ezimnandi zikaMax Fist zamaqhawe amakhulu kanye nesitha sakhe esibi esivela endaweni yakhe yonke, okungenani bazokwenzela ukuzijabulisa. Kepha uzodinga usizo lukaMax lapho udadewabo u-Indigo (uZolee Griggs, Okuncaneubambeka neMenenja (uGlenn Howerton, Kuhlala Kunelanga EFiladelphia) i-crimelord enobudlova efuna i-Indigo ekubambeni kwakhe. Manje izingane zakwabo kufanele zihlangane noMax Fist futhi zithole ukuthi izindaba zakhe ezinde ziyiqiniso noma uyisilima. Noma mhlawumbe bobabili?
Isitha esikhulu Kuvela kumbhali / umqondisi u-Adam Egypt Mortimer, osinikeze i-movie yengqondo ka-2019 nengqondo yokubhoboza umzimba UDaniel Akayena Ongokoqobo. Ngokufana nomsebenzi wakhe wokugcina, wenze okuthile okungahloniphi ukufakwa ebhokisini lube uhlobo olulodwa noma isitayela esisodwa. Isitha esikhulu iyi-movie yezenzo zobugebengu, isimanga esingokwengqondo, i-super hero movie ivuliwe ekhanda. Futhi bekungeke kufike ngesikhathi esingcono. Yize bengingasho ukuthi abantu bayagula ngama-movie amaqhawe amakhulu, kukhona ukukhathala okuvela emikhawulweni yezindaba zabo. Futhi lokhu kudlula kubo ngqo. Iqiniso nokukhohliswa kweMax Fist kugcinwa phezulu, ngezinkomba nokujika okuzokwenza izethameli zingabaze ubuqiniso bezimangalo zalowo ocatshangelwa ukuthi ungumpetha. Kepha ngeke bangabaze ukuthi ungumshini wokulwa.
UJoe Manganiello unikeza isihogo ngokusebenza njengoMax. Cabanga uThor noma uSuperman othukuthele elwa nokulahleka kwakhe kobunikazi, kwamandla. Noma esehlanya, awukwazi ukusiza kodwa uzwelana nalo mfana, noma ngabe ushaya izindonga zezitini ukuze ezwe okuthile futhi angabhoboza ugebhezi lomuntu ngezandla zakhe. Kepha futhi, kungaba ukubonga kuzo zonke izidakamizwa notshwala ohlelweni lwakhe. USkylan Brooks noZolee Griggs bagqame njengama-sidekick akhe angazi yize benomqondo onengqondo nomqondo ongcono kunalowo odidekile abe yiqhawe. UZolee njengo-Indigo ukhombisa ubuqili obungenakuphikwa futhi akanandaba, noma ngabe amathuba aphikisana naye futhi ufakwa ezimweni ezinzima ngezibhamu ezingokoqobo ekhanda lakhe. UHamster uyisilaleli esihle kakhulu sokulalela futhi unikeza ukwesekwa endabeni kaMax Fist. Ukunikeza umbono wendawo yonke ngemfihlakalo yakhe nasekusebenzelaneni kwakhe nezwe lansuku zonke. Futhi uGlenn Howerton ucwebezela ngokuqhuma ngokuphelele njengeMenenja engafinyeleleki kalula. Ukungeza ama-quirks enkosini eyingozi kakhulu futhi ecasulwa kalula.
Izigcawu zesenzo ziyakhathaza noma nini lapho iMax Fist iphuma yonke. Kungaba ngamapayipi, izibhamu, noma nje izandla zakhe ezibonakala zingenakwephuka, uMax wenza inyama egayiwe nganoma ngubani osendleleni yakhe. Ikakhulukazi uma edakiwe. Futhi ukukhohlisa kukaMax okudlule nokungabakhona kusingathwa ngobuciko ngochungechunge olunemibala egqamile nolwe-surrealist lokulandelana kwesitayela sokuhlekisa nokulandelwa kwe-rotoscoping. Imvelaphi kaMax iyizwe elihlekisayo lesitayela sencwadi, ngakho-ke kunengqondo ukuthi yethulwe kakhulu. Futhi kwenza umehluko ohehayo phakathi kwezici ze-sci-fi kanye neqiniso elithulisiwe nelingaconsi phansi uMax uzithola evalelekile. Izakhiwo ziyajika futhi zihlangane, zinqamule ngendlela enhle elinganiselayo yize ezinye izikhathi zidonse kancane.
Ngaba nenhlanhla yokuzwa Isitha esikhulu ku-Beyond Fest 2020 e-Mission Tiki drive-in futhi bekuqhuma esikrinini esikhulu. Futhi, abalingisi nabasebenzi kubandakanya u-Adam Egypt Mortimer noJoe Manganiello (Enenja yakhe, uBubbles!), ISkylan Brooks, uZolee Griggs nabanye kubandakanya nabakhiqizi bakwaSpectrevision babekhona nemoto yeLegion M yama-photo-ops nama-intros.
Isikweletu Sezithombe uLisa O'Connor: Umqondisi / Umbhali u-Adam Egypt Mortimer, uJoe Manganiello, uBubbles inja no-Elijah Wood
Isitha esikhulu bekujabulisa njengokubamba inhliziyo nokubhoboza ubuso. Yize abantu bengakalazi igama elithi "Max Fist", banethemba lokuthi bazotshala imali njengoHamster.
Isitha esikhulu kulindeleke ukuthi ikhishwe ngoDisemba 11, 2020.
2020isenzoadam egibhitheIsitha esikhuluBeyond FestUGlenn HowertonHorrorUJoe ManganielloBuyekezaIsayensi-fiSpectreVision
IHorror Film Festival 2020: Bona Uhlu Olugcwele Lwabaphumelele!
'I-GI Joe: I-Operation Blackout' iyiMishini Yehlulekile